Wararka - Halkee ayaa si weyn looga isticmaalaa mesh silig birta ah
Mesh birta birta ayaa si weyn loo adeegsadaa, gaar ahaan gidaarka dhismayaasha, markaa sida loo rakibo qalabka. Waxa ugu horreeya waa in la dhigo sabuuradda la soo saaray dhulka, ka dibna la dul saaro lakabka milicsiga ee warqadda biraha aluminiumka ah. Ugu dambayntii, mesh birta birta ah ayaa la dhigaa, ka dibna tuubooyinka iyo fiilooyinka ayaa la dhigaa, ka dibna waa la hagaajiyaa, si farsamaynta dambe loo sameeyo.
Waxaa jira noocyo badan oo mesh silig bir ah, laakiin sidoo kale sababta oo ah qalabka kala duwan iyo xirfadaha wax -qabadka. Mesh silig bir ah oo galvanized ah ayaa caadi ahaan la isticmaalaa. Galvanizing waa hab ka hortagga daxalka, kaas oo kordhin kara nolosha adeegga. Guud ahaan, alaabta birta waa in la galvanized. Mesh silig birta galvanized ah wuxuu ka samaysan yahay silig bir-kaarboon oo yar yar oo lagu qalay qalab fiican iyadoo loo marayo xirfado gaar ah.
Ka dib markii lagu farsameeyo mesh, dusha waxaa lagu daaweeyaa xirfadda qoofinta zinc. Dusha mesh ee badeecada la warshadeeyay waa mid siman, cabirka mesh -na waa mid caadi ah, daacadnimadu aad bay u wanaagsan tahay, dhismuhuna waa mid isku dhafan. Xitaa haddii cadaadis la saaro qaybaha qaarkood, ma jiri doonto dabacsanaan. Waa qalab dhisme oo aad u fiican. Mesh silig birta galvanized waxaa si weyn loo isticmaalaa dhismaha, gaadiidka, warshadaha iyo beeraha kale.
Haddii aad rabto inaad iibsato alaab tayo sare leh, waxaad u baahan tahay inaad isbarbar dhigto soo saarayaasha. Marka la eego soo -saarayaasha isku -dhafan ee suuqa, yaa si fiican u siin kara macaamiisha alaab lagu qanco? Hebei Dashang alaabta mesh silig Co., Ltd. diiradda on R & D iyo wax soo saarka oo dhan cayn kasta oo alaabta mesh silig, la tilmaamaha kala duwan. Waxay si buuxda u qorshayn kartaa una dejin kartaa hadba baahida macaamiisha, waxayna hormarisaa tayada bilawga ilaa dhammaadka. Sidaa darteed, waxaa si weyn u ammaanay oo ammaanay macaamiisha
Waqtiga dhejinta: Aug-24-2021